Kenya oo miisaaniyad gooniya u qoondeysay La-dagaalanka Alshabaab.
Wasaaradda Gaashaandhigga Kenya ayaa u gudbisay Barlamaanka dalkaasi Miisaniyadda Ciiddanka ee sannadka soo socda ee 2017-ka.
Codsigaasi ayaa lagu sheegay in maaliyadaasi loo adeegsan doono Hawlgalladda Ciiddamadda iyo Doorka Maamulka ugu guuleysan lahaa Ammaanka dalkaasi.
Sida uu qoray Wargeyska maalinlaha Business daily Africa waxay Xildhibaanadda Barlamaanka Kenya shalay ansixiyeen in Wasaaradda Difaaca loo fasaxo Kharaj dhan 103.6 Billion oo Shillinka Kenya si ay ugu adeegsato Hawlaha loo idmaday ee sannad maaliyadeedka 2017 ilaa 2018-ka.
Wasiirka Difaaca ee dalkaasi, haweeneyda lagu magacaabo Raychael Omamo ayaa qirtay inay Wasaaradeeda dhibaato ka haysato Kharajka kordhayo ee baahida dhinaca Qalabka Hawlgalladda lagu sugayo Nabadda iyo Ammaanka.
Dhinaca kale, Wasaaradda Difaaca Kenya ayaa sheegtay inay 9.9 Billion ee Shillinka Kenya oo ka mid ah Miisaaniyadda soo socota loogu adeegsan doono Hawlgalka ay Ciiddanka Kenya kula jiraan Dagaalamayaasha Xarakadda Alshabaab.
Ciiddanka Kenya waxay xuduudka Somalia ka soo gudbeen bishi iOctober ee sannadkii 2011-kii, iyagoo ku andacoonayey inay la dagaalamayaan Alshabaab oo iyagu weeraro joogto ah ka geystay gudaha dalkaasi.